Ukwenza izinkampani kufanele zithengise izinketho zamasheya
Okusho umkhawulo ku forex
Ujohn j murphy intermarket amasu okuhweba ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe
Ukwenza izinkampani kufanele zithengise izinketho zamasheya - Ukwenza zithengise
· Ukuveza izinhloso zocwaningo. · Ukucacisa kahle uhlaka locwaningo.
Ngikhumbula isicelo somzali ongowoMdabu waseMelika onengane eneminyaka emihlanu okwakuthiwa ‘ iyisidomu’ : ‘ UWind- Wolf wazi amagama nemikhuba yokufuduka kwezinyoni ezingaphezu kwezingu- 40. Ezazincishwe amathuba kufanele zinikezwe inhlonipho efanayo nezinye izilimi.
Lesisimiselo sisho ukuthi, uma kufanele kuthathwe isinqumo, noma kufanele kwenziwe isiyekelelo esithile, okufanele kuhambe phambili kuqala lapha, yilokho. · Ukunquma indlela efanele yokucwaninga ngesihloko.
· Ukwenza uhlu lwezincwadi ezisetshenzisiwe. 2 Isisebenzi sibeka phambili lokho okungamagugu emphakathini ekwenzeni umsebenzi waso.
Ukugxilisisa emalini noma ezimpahleni ezisetshenziswayo ukwenza umsebenzi Umkhiqizo ogxilisisa kulokhu uyindlela yokukhiqiza lapho imishini ( uma ibekwe yaqophisana namandla abasebenzi) iyiphuzu elisemqoka kunawo wonke emsebenzini wokukhiqiza, izibonelo zingatholakala ohwebeni lwezokwenza izinto ezithile. UPandor( 1995) ugcizelela ukuthi izingane zisifunde isiNgisi kodwa nezilimi zabansundu zifundiswe ezikoleni.
Ukwenza izinkampani kufanele zithengise izinketho zamasheya. Yiba nohlu lwezidingo zakho nezikweletu onazo bese ubeka eceleni imali yokukhokhela izikweletu nyanga zonke.
Emthethweni, futhi izibopho ezibekwe yiwo kufanele zilandelwe. ( 2) Zonke izakhamuzi - ( a) zinegunya elilinganayo lokuthola amalungelo, ilungelomvume nezinzuzo zobuzwe; futhi ( b) zethweswe ngokulinganayo izibopho nemithwalo ehambisana nobuzwe.
UWilliam Ayers waphawula: “ Kufanele sithole indlela engcono, indlela eyakha amandla, ulwazi, ubuciko namakhono. Ukwenza ucwaningo okokuqala ngesihloko.
Ube esenikeza amasu ambalwa athe azosiza abavele ngekhanda ezikweletini. · Ukuchaza isihloko nokubuza umbuzo/ inkinga yocwaningo.
Izintokazi zaKwaMashu ezinenkampani esiza izinkampani ezisafufusa, zitshengisa ukuthi ningaba abangani niphinde niqhube ibhizinisi ngempumelelo. Kufanele ube nohlu lwezidingo zakho zanyanga zonke ubeke eqhulwini ukukhokhela izikweletu, ” kusho uNksz Sibiya.
Ngenxa yokuphatha, kufanele zikwazi ukumelana nenqubo yokubeka izinto obala. ( 1) Ubuzwe bezakhamuzi zaseNingizimu Afrika buyafana.
I icici ikhadi le forex login online
Fx ukuhweba kwe fx
Izinhlelo zokuhweba zokusabalalisa ukubheja pdf